Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. बाह्रौ गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी सम्पन्न – Emountain TV
बाह्रौ गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी सम्पन्न
काठमाडौं, १८ कात्तिक । बाह्रौ गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी आइतवार सम्पन्न भएको छ । चारदिन सम्म ललितपुर स्थित जावलाखेल मैदानमा चलेको प्रदर्शनी आइतवार सम्पन्न भएको हो । प्रदर्शनीमा सहभागी ब्यवसायीहरुले प्रदर्शनीवाट आफूहरु उत्साहित भएको बताएका छन । फूल व्यवसायीहरुले यस व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको उल्लेख गर्दै विदेशमा जाने नेपालीहरुलाई स्वदेशमा नै फूल व्यवसाय गर्न पनि सुझाव दिएका छन ।
फूल व्यवसायीहरुले युवाहरु कामको खोजी गर्दे बिदेसिनु भन्दा स्वदेशमै फूल व्यवसाय गर्न पनि सुझाव दिएका छन । स्वदेशमै बसेर फूलको व्यवसाय गरे राम्रो आम्दानी हुने उनीहरुको भनाई छ ।
नेपालमा फूल व्यवसायबाट गत वर्ष २ अर्व बराबरको आयआर्जन भएको थियो । व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि हरेक वर्ष प्रर्दशनी आयोजना हुने गरेको छ । यस वर्षको प्रर्दशनी पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको फ्लारीकल्चर एशोसिएशनले जनाएको छ । यस वर्षको प्रर्दशनीमा ४२ हजारले अवलोकन गरेको र ६५ लाख भन्दा बढिको कारोबार भएको एशोसिएशनले जानकारी दिएको छ ।
चार वर्ष भित्र नेपाललाई फूलमा आत्मनिर्भर बनाउने एशोसिएशनको योजना छ । तिहारलाई लक्षित गरेर हरेक वर्ष फूल प्रर्दशनी हुने गरेको छ । यस वर्ष प्रर्दशनीमा ४ सय ५० प्रजातिका फूलहरु राखिएको थियो ।
आइतबार, १८ कार्तिक २०७५
नेपालको जनसङ्ख्या ३ करोड ३ लाख पुग्ने प्रक्षेपण
‘दर्ता नगरे सामाजिक सञ्जाल बन्द’
एक वर्ष भित्र मालपोत तथा नापी कार्यालयहरु विद्युतीय प्रणालीबाट संचालन गर्ने
वर्ष दिनभित्रै नेपालमा गाडी उत्पादन सुरू, ४० प्रतिशतसम्म सस्तिने
कम्प्युटर देख्न नपाउँदै कम्प्युटर विषयकाे परीक्षा दिन बाध्य
यसकारण लाग्दैन समयमै फोन
अमेरिकामै बोइङ म्याक्सको उडान स्थगित